Foshan Hermes သံမဏိ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
တရုတ်အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်သံမဏိမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်နာအဖြစ်, Foshan Hermes (Hengmei) Steel Co. , Ltd မှ 10 နှစ်ကျော်အဘို့အသံမဏိဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အရည်အသွေးအဘို့ကြိုးပမ်းရာ 2006 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ဝေး, ငါတို့သံမဏိပစ္စည်းရဲ့ဒီဇိုင်း၏ကြီးမားသောဘက်ပေါင်းစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, အပြောင်းအလဲနဲ့သို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံပေါင်းအများကြီးအတွက်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရှိခြင်းအခုဆိုရင် Hermes (Hengmei) သံမဏိ။
အိန္ဒိယ: ကျနော်တို့ 2010 ခုနှစ်ယခုငါတို့မွန်ဘိုင်း, ချန်နိုင်းနှင့်ဒေလီ၌ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပေါင်းကတည်းကအိန္ဒိယစျေးကွက်မှပေးဝေရေးစတင်ဖောက်သည်အများကြီး Hermes ရဲ့အရည်အသွေးပိုနှစ်သက်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရောင်းချရန်အသင်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူ, ယခုတွင်ငါတို့သည်ပိုပိုပြီးဖောက်သည်စုဆောင်းနေကြသည်။ အားလုံးဖောက်သည်ပြီးသား Hermes သံမဏိ၏မိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပါပြီ။
စီမံကိန်းများနှင့်ပရိဘောဂစက်ရုံတွေအများကြီးမှ supply, လေဆိပ်, Metro နှင့်အဆောက်အအုံဗိသုကာအတွက်စီမံကိန်းကိုတောင်ကိုရီးယား, ထိုင်း, ဗီယက်နမ်, အင်ဒိုနီးရှား, ပါကစ္စတန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဖိလစ်ပိုင်အတွက်သံမဏိ stockholder ။
တောင်းဆိုနှင့်တောင်းဆိုမှုကိုဖောက်သည်အများကြီးဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်, ယခုတွင်ငါတို့သည်စသည်တို့ကို partition ကို, ဖြတ်တောက်မှု, ဓာတ်လှေကားအစိတ်အပိုင်းများ, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းအပါအဝင်တိုင်းသံမဏိကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိလယ်ပြင်, သံမဏိ mosaic, သံမဏိထွက်ပစ္စည်းများ & လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများမှကိုယျ့ကိုယျကိုမြှုပ်နှံထား
- ဤနယ်ပယ်များတွင် 10 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ် & ပြောင်းလဲနေသောတင်ပို့အသင်းရှိသည်။
- ရောင်းအားကျွန်တော်တို့၏လစဉ်အသံအတိုးအကျယ်ထက်ပို 10000 တန်ချိန်ရောက်ရှိ, ငါတို့ထုတ်ကုန်စသည်တို့ကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်း, အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အာဖရိက, တူ, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလူကြိုက်များ
- အဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူ, ကျနော်တို့ကောင်းစွာကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုစံတစ်ခုမော်ဒယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။
- Completed အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ပြီးနောက်-ရောင်းချထောက်ခံမှု & ဝန်ဆောင်မှု။
- သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အမြဲကြိုဆိုနေပါသည်! အခမဲ့နမူနာတောင်းဆိုချက်အပေါ်ကိုစလှေတျနိုငျသညျ,
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အကြီးမြတ်ဆုံးဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်နာ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုများအတွက်စံပြမိတ်ဖက်အဖြစ် Hermes သံမဏိကိုရှေးခယျြ! ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, တစ်ဦးတောက်ပအနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်!
Foshan Hermes (Hengmei) Steel Co. , Ltd မှ
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-757-63999930
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-757-63999928